Prasta Khabar-थाहानगरलाई कृषि आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने : डिना
थाहानगरलाई कृषि आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने : डिना
२८ कार्तिक, हेटौंडा । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार महालक्ष्मी उपाध्याय डीनाले आर्थिक समृद्धि लागि थाहानगरलाई कृषिको आधुनिकीकरणको रुपमा बिकास गर्नुपर्ने बताइन् ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चुनावी अभियानअन्तर्गत मंगलबार थाहानगरपालिका–५ स्थित सानो फाखलमा प्रचार प्रसार समितिको वडा कार्यालय उद्घाटन गर्दै डिनाले कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको थाहानगरलाई कृषि आधुनिकीकरण गर्नुको साथै दामनलाई पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । संविधान सभाको चुनावमा मकवानपुरको तीन क्षेत्रबाट एमालेले चुनाव जितेपनि विकासको नाममा केही गर्न नसकेकोले विकासको कार्यको लागि लोकतान्त्रिक गठबन्धनले जित्नु अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ रहेको थियो ।
नेपाली काँग्रेस थाहा नगरपालिका वडा नम्वर ५ का सभापति भीमबहादुर वाइवाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मकवानपुर प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ क का प्रदेश सदस्य उम्मेदवार यतीराज सापकोटा, थाहानगरपालिका उपमेयर खड्ग गोपाली, निर्वाचन परिचालन संयोजक सन्तबहादुर गुरुङलगायतले बोलेका थिए ।
मंगलबार सुमिना भोम्जनको संयोजकत्वमा १५ जना महिला निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन भएको छ । त्यसैगरी सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा १५१ निर्वाचन परिचालन समिती गठन भएको छ ।
माके को राष्ट्रियसभामा १३ को उम्मेदवारी(हेनुहोस सुचि सहित)
हेटौंडालाई स्थायी मुकाम बन्न कसैले रोक्न सक्दैनः बानियाँ
किन दिईयो बानियाँलाई बधाई ?
काँग्रेस मकवानपुरद्वारा सम्मान
३ नम्बर प्रदेश सदस्यहरुको सपथग्रहण सकियो
डोरमणी पौडेलद्वारा सभामुखको सपथ
हेटौँडा राजधानी भएकोमा दीप प्रज्वलन
९ माघ , हेटौंडा । ट्रेड युनियन काँग्रेस संग आबद्ध नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध श्रमिक संघ (काउन) मकवानपुरको...
घरेलु मदिरा र गाँजा सहित मानिस पक्राउ
९ माघ, हेटौँडा । प्रहरी चौकी ठुलोदमार बाट खटिएको प्रहरी टोलीले हेटौँडा १८ स्याउली बजारको सडक खण्डमा सवारी...
हेटौँडा क्याम्पसमा सेमेष्टर प्रणाली शुरु
९ माघ, हेटौँडा । हेटौँडा क्याम्पसले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमएड कक्षालाई समेस्टर प्रणालीमा लगेको छ । क्याम्पसले...
९ माघ, हेटौँडा । नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि १३ जनाको उम्मेदवारी टुङ्गो...
समस्या समाधान गर्न संघको आग्रह
८ माघ, हेटौँडा । आफ्ना सदस्यहरुको काममा अवरोध भएको भन्दै निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरले समस्या समाधानका लागि...
मउवा संघद्वारा डा. उपाध्यायको सम्मान
८ माघ, हेटौँडा । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले सोमबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रबन्धक डा. शंकरप्रसाद...
८ माघ, हेटौँडा । पूर्व गृहराज्य मन्त्री एवम् प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर बानियाँले हेटौंडा ३ नम्बर प्रदेशको...
राजदेवीमा ३९ लाख रकम संकलन
८ माघ, हेटौँडा । हेटौडा–१७ राजदेवीमा रहेको राजदेवी माविले विद्यालयको भौतिक एवम शैक्षिक उन्नतीको लागि संचालन...
फागुन १ बाट फुटपाट व्यवस्थित गरिने
८ माघ, हेटौँडा । फागुन १ गतेबाट हेटौँडामा फुटपाथ व्यवसायलाई व्यवस्थित गरिने भएको छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य...
७ माघ, हेटौँडा । तीन जिल्लाका सभापतिहरुले पूर्वगृहराज्यमन्त्री, प्रदेश सभा सांसद तथा नेपाली काँग्रेस...
ईन्द्रबहादुर बानियाँलाई पितृ शोक
१० पुस, हेटौंडा । पूर्व गृहराज्यमन्त्री एवम् प्रदेश सभा सदस्य ईन्द्रबहादुर बानियाँलाई पितृशोक परेको छ । नेपाली...
को को छन काँग्रेसबाट समानुपातिकमा पर्ने सांसद (नामावली सहित)
१५ पुस, हेटौँडा । नेपाली काँग्रेसले प्रदेश सभाको लागि समानुपातिक तर्फबाट सांसदहरु नाम निर्वाचन आयोगलाई पठाएको छ...
मकवानपुर प्रहरीद्वारा २० विद्यार्थी नियन्त्रणमा
११ पुस, हेटौंडा । मकवानपुर प्रहरीद्वारा मंगलबार विहान २० जना विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । वडा प्रहरी...
बकैयाबाट गौ हत्या गर्ने ४ पक्राउ
१७ पुस, हेटौँडा । गौ हत्या गरी मासु खाने ४ जनालाई आज प्र्रहरीले बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर ७ कान्द्र्राङबाट...
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन परिणाम आउन शुरू
१८ पुस, हेटौँडा । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कृष्ण कटुवालको प्यानलका...
अभिभावकको जिम्मा लगाईए विद्यार्थी
११ पुस, हेटौँडा । मकवानपुर प्रहरीद्वारा मंगलबार विहान नियन्त्रणमा लिईएका २० जना विद्यार्थीलाई अभिभावकको जिम्मा...
हेटौँडा–धरान चतरा सडकको काम तिब्र
९ पुस, हेटौँडा । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको मकवानपुरको हेटौंडादेखि सुनसरीको धरानदसम्म निर्माणाधिन...
हामीले नेतृत्वको गलत कामको विरोध गरेका हौं : कटुवाल
मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघको पुस १५ गतेदेखि शुरु हुन गईरहेको ५१ औं बार्षिक साधारण सभामा नेतृत्वका लागि अहिले मत...